Masuuliyada Shirkadda - MH string - Ningbo MH string Co., Ltd.
Nagu saabsan /
MH waxay sameysay sanduuqa "Xiao dou ya" Fund si ay uga caawiso carruurta tuulada xun inay dhammeeyaan daraasaddooda. MH waxay maalgelisay 7 carruurta saboolka ah muddo toban sano ah.
Xilliga xagaaga, MH tabarucayaasha waxay u diri doonaan hadiyad diyaarsan oo loogu talagalay shaqaalaha fayadhowrka iyo bilayska taraafigga. HH waxay taageertaa dhaqdhaqaaqa "dhar dharka" oo waxay ugu deeqday dharka 10,000pcs tuulada saboolka ah ee Guizhou, Yunnan iyo meelaha kale ee saboolka ah.
Sannad kasta, mutadawacyada MH waxay booqan doonaan carruurta Ningbo Enmeier Machadka Ammaanka Carruurta, oo la ciyaaraya carruurta, iyo inay siiyaan hadiyado.